Digital Forensic Quizs (6-25)
Digital Forensics Science နှင့် ဆိုက်ဘာမှုခင်းများ အကြောင်းအား Knowledge Sharing ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
India t Information Technology Act, 2000 (ITA 2008) , Indian Penal Code (IPC), Indian Evidence Act (IEA) ပေါ်တွင် မူတည်ပြီး ပြုလုပ်ထားသော အမေး အဖြေများ ဖြစ်ပါသည်။
Digital Forensics Professional တစ်ယောက်က Cyber Law ကိုသိသင့်ပါသလား ? သိသင့်တယ်ဆိုရင် ဘာလို့သိသင့်တာလဲ ?
မေးခွန်းကိုဖြေမယ်ဆိုရင် သိသင့်သလို မသိရင်လဲ ရတယ်လို ဖြေချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သိသင့်တယ်ဆိုတာကို နည်းနည်းဇောင်းပေးပြီး ပြောပါရစေ။ Digital forensics ဆိုတာက techno-legal field ဖြစ်တာကြောင့် Forensics Report ကိုရေးသားပြင်ဆင်သူက တရားရုံးမှာ သက်သေထွက်ဆိုရမှာ ဖြစ်တာကြောင့် Cyber Law ကိုသိရပါမယ်။ Digital Forensics Professional တစ်ယောက်က Law ကို လုံးဝမသိဘူးဆိုတာမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ အခြားသော ဥပဒေတွေထဲကမှ Cyber Law ကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် သိသင့်ပါတယ်။ Digital Forensics Professional တစ်ယောက်က သူ့ရဲ့တာဝန် အလုပ်နဲ့ ကျင့်ဝတ်တွေကို သိသင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အစိုးရဘက်မှာ Investigation လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် Law ကို သိထားခြင်းဖြင့် ပိုပြီးအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ Digital Forensics Professional တစ်ယောက်အနေနဲ့ opinion (ထင်မြင်ယူဆချက်) ပေးတဲ့အခါမှာ တရားရုံးမှာ ပြန်လှန်မေးခွန်းမေးတဲ့အခါမှာ Law ကို သိထားရင် ပိုပြီး အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ကိုယ့်ရဲ့ opinion ကို အများသိအောင် ပြောကြားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကယ်တန်းပြောရရင် Cyber Law သာမက အခြားသော ပတ်သတ်ဆက်နွယ်နေတဲ့ ဥပဒေတွေကိုပါသိထားသင့်ပါတယ်။ ဒါမှ ကိုယ်စစ်ဆေးတဲ့ Evidences တေထဲမှာ အကျုံးဝင်လာခဲ့ရင် ကိုယ့်အတွက်ပို အဆင်ပြေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Law ကို လုံးဝမသိဘူးဆိုရင် DF Professional တစ်ယောက်အနေနဲ့ အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ DF Professional ရဲ့ အဓိက တာဝန်က Case နဲ့ပတ်သတ်တာကို Analysis လုပ်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ Professional က ဥပဒေထက် နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်မှုက ပိုပြီး အဓိက ကျပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်မှုရှိမှသာ Evidence တွေကို Analysis လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာ တိုးတက်လာမှုကြောင့် စိမ်ခေါ်မှု များစွာက Digital Forensics Field မှာသာမက investigators နဲ့ judiciary ပိုင်းမှာပါ ရှိနေပါတယ်။ Cyber Law ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်မှု တွေက စိန်ခေါ်မှု အဖြစ်ရှိနေမှာပါ။ AI အသုံးချမှု များလာတာကြောင့် AI နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Cyber Law တွေ Investigation နဲ့ Cyber Law မှာ AI အသုံးချတာတွေ လိုအပ်လာပါလိမ့်မယ်။
"The role ofadigital forensics expert is to carry out forensic analysis of digital artefacts that come to his lab for analysis and produce an authentic, reliable and legally tenable forensic report that can stand the scrutiny of law."
Digital Forensics Professional တစ်ယောက် အနေဖြင့် တရားရုံးတွင် သက်သေခံရန်အတွက် ပြင်ဆင်ရန် အချက်များ
Digital Forensic Analyis ပြုလုပ်ရာမှာ အဓိက လိုက်နာရမည့် အချက်အချို့မှာ
၁။ Analysis လုပ်ထားပြီးသော အချက်အလက်များကို မလွဲမှား မပျောက်ပျက် စေရန်။
၂။ မူရင်း Evidence Devices ပေါ်တွင် မည်သည့်အခါမှ စစ်ဆေးခြင်း မပြုလုပ်ရန်။
၃။ စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်း လိုင်စင်ရှိသော digital forensic Tools များကိုသာ အသုံးပြုရန်။
(Open Source အသုံးပြုပါက အသုံးပြုသော Tools အကြောင်း အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးသုံးစွဲရန်။ )
၄။ စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်း ပတ်ဝန်းကျင်မှ မည်သူ့ကိုမျှ မယုံကြည်ရန်။
၅။ စတင်စစ်ဆေးချိန်မှ စတင်ပြီး စစ်ဆေးသမျှ အဆင့်တိုင်းကို Document ပြုလုပ်ရန်။
၆။ ဥပဒေကို သေချာသိရှိရန်။
ကြုံတွေ့နိုင်သည့် အမေး အဖြေများ
Digital Forensics နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ qualifications နဲ့ experience တွေက ဘာတွေလဲ ?
ရရှိထားသောဘွဲ့။ Digital Forensics နှင့်ပတ်သတ်သော Certificate/Course , အတွေ့အကြုံ
ယခု Forensics Report ကို ကိုယ်တိုင်ရေးသားတာလား (သို့မဟုတ်) Evidences Analysis လုပ်ရာမှာ ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်တာလား ? မည်သူကရေးသားပြီး (သို့မဟုတ်) မည်သူက စစ်ဆေးတာလဲ
Opinion ကို ကောင်းကောင်း ပေးနိုင်ခြင်း ရှိ၊မရှိ မေးမြန်းတာ ဖြစ်သောကြောင့်
ရေးသားသူ (သို့မဟုတ်) စစ်ဆေးသူ ဖြစ်ကြောင့် ရှင်းလင်းရန်။
ယခု Forensics Report ကို ရေးသားသူ စစ်ဆေးသူ ဘယ်သူလဲ။ Report ပေါ်က လက်မှတ်က ရေးသားသူရဲ့ လက်မှတ် မှန်ကန်ပါသလား ?
မူရင်းလက်မှတ် မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေပြရန်
cyber law အကြောင်းနဲ့ ယခု Case နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Law အကြောင်းကို ကောင်းစွာ သိပါသလား ?
ကျွမ်းကျင်မှု ရှိ မရှိ ဖြေဆိုရန်
Evidence ကို Lab သို့ သယ်ဆောင်လာပုံ၊ Lab မှာ Analysis ပြုလုပ်ပုံကို ရှင်းလင်းပြနိုင်မလား ?
Evidence Report Form နှင့် Chain Of Custody (COC) Form ထဲတွင်ပါဝင်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းရန်။
နောင်လာနိုင်မည့် မေးခွန်း အဖြေများတွင် ဖြေဆိုမှုနှင့် Report ထဲတွင် ပါဝင်တာ ထပ်တူကျရန်။
Mobile Phones Analysis ပြုလုပ်ပုံကို ရှင်းလင်းပြနိုင်မလား ?
Evidence Report Form ထဲတွင် စစ်ဆေးပုံ Opinion နှင့် စစ်ဆေးသော Forensis Tool အကြောင်းပါဝင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ နောင်လာနိုင်မည့် မေးခွန်း အဖြေများတွင် ဖြေဆိုမှုနှင့် Report ထဲတွင် ပါဝင်တာ ထပ်တူကျရန်။
Evidence Report က မှန်ကန်ပါတယ်လို့ သင့်ဘက်က ပြောနိုင်ပါသလား ?
စစ်ဆေးနိုင်ရန် အတွက် Digital Forensis Lab က အဆင့်အတန်း မှီပါသလား ?
Lab ရဲ့ Standard နှင့် Lab အတွက် ရထားသော ထောက်ခံချက်များ ပြသရန်
Evidence ရဲ့integrity ကို မှန်ကန်ကြောင်း ပြသနိုင်ပါသလား ?
integrity နှင့် ပက်သတ်ပြီး Forensics Report ထဲတွင်ပါဝင်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
Original Evidence Devices တွေကို စစ်ဆေးပြီး ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းထားရှိသလဲ ? မူရင်းကို ယခု တင်ပြနိုင်မလား ?
Imaging ပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်း ထိန်းသိမ်းထားရှိပုံကို ဖြေဆိုရန်
စစ်ဆေးနေစဉ် ဘယ်လို Tools မျိုးကို အသုံးပြုသလဲ လိုင်စင်ရော ရှိပါသလား ?
Forensics Report ထဲတွင် မည်သည်ကို သုံးထားသည်ကို အသေးစိတ် တွေ့နိုင်ပါသည်။
သုံးစွဲထားတဲ့ Tools ကို ဘယ်လိုယုံကြည်လို့ ရနိုင်မလဲ ?
အခြားသော Tools ဖြင့် Evidence ရရှိထားပုံကို ပြသရန် (သို့ မဟုတ် ) အခြားသော Tools ဖြင့် စစ်ဆေးခံနိုင်ကြောင်း ပြောရန်
TikTok (tiktok.com) Imvestigation #OSINT
TikTok isasocial media video application originally created for creating and sharing short lip-sync, comedy, and talent videos. Today, it is very similar to Vine, which was shut down in 2016. TikTok allows users to create standard videos of3to 15 seconds in length and looping videos of3to 60 seconds in length. It is popular globally and was the most downloaded app in the U.S. during various months in 2018. It should not be ignored when investigating younger targets. The data is public, and we need to focus on search, usernames, comments, and acquisition of videos. TikTok Search: TikTok does not offer any native search options within its pages or profiles. However, third-party resources provideahashtag search option. I have found TikTokDom ( tiktokdom.com ) helpful, but prefer TikTokAPI (tiktokapi.ga). Within this page, click on “Hashtag Search” and provide any complete or partial search terms. Searching “osint” provides results of “inosint”, “osintamu”, and any other hash
Google Reverse Location Search Warrants (GEOFENCE SEARCH WARRANT) And Transparency Report
Crime တစ်ခုဖြစ်ရင် လိုအပ်လာရင် အမှု ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာနဲ့ အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ Ph တွေရဲ့တည်နေရာကို တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒီဂရီအတွင်းမှာရှိတဲ့ ဖုန်းတွေရဲ့တည်နေရာ အမျိုးအစား။(ရလာတဲ့ အချက်အလက်တွေအပေါ်မူတည်ပြီး လိုအပ်ရင် သက်ဆိုင်ရာ Telecom နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး စီစစ်စစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ (Example ဆက်သွယ်ရေးတိုင် BTS ဘယ်လောက်ရဲ့ ဘယ် ဒီဂရီကနေ ဘယ် ဒီဂရီအတွင်း) ( ဘယ်အချိန်ကနေ ဘယ်အချိန်အတွင်း) တောင်းဆိုတဲ့ ပုံစံကို Google မှာလွယ်လွယ်ကူကူရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတောင်းဆိုနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကတော့ Gmail Subscriber registration information (e.g., name, account creation information, associated email addresses, phone number) Sign-in IP addresses and associated time stamps YouTube Subscriber registration information Sign-in IP addresses and associated time stamps Google Voice Subscriber registration information Sign-up IP address and associated time stamp Telephone connection records Billing information Blogger Blog registration page Blog owner
Digital Forensics Investigator Hypothesis -1
Case - CCTV Video File ကို ပေးရာတွင် ထပ်ဆင့်ကူးယူသည့် USB ထဲတွင်ရှိသည့် Video File သည် တည်းဖြတ်လိမ်လည်ခြင်း ဟုတ် မဟုတ် စစ်ဆေးရန် 1- Chain of Custody Form ကို Check ။ Case စတင်ဖြစ်တဲ့အချိန်။ USB ပေးတဲ့အချိန် ။ စစ်ဆေးဖို့ USB စတင်ရောက်တဲ့အချိန် ။သိမ်းဆည်းတဲ့ အချိန် ။ မိမိထံရောက်ရှိတဲ့ အချိန်။ ကြားထဲ‌မှာ PUBG မှာလို လပ် သွားနိုင်တဲ့ အချိန်။ Timeline ဆွဲလိုက်ရင် ပိုရှင်းလင်းပါသည်။ 2.Ok လပ်သွားတဲ့ အချိန်တွေ့ပြီး ဒါဆိုရင် Digital Forensics သည် မှုခင်းသိပ္ပံရဲ့ အခွဲဖြစ်ခြင်းကြောင့် သိပွံအချက်အလက်အရပဲ Opinion ပေးရမယ်။ 3. သံသယ ရှိသူက Knowledge ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ Who မေးခွန်း။ လပ်သွားတဲ့ အချိန်တစ်ခုမှာ သူဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲ။ How မေးခွန်း။ ကြိုတင် ကြံစည်ထားန်ုင်လား ရုတ်တရက် လုပ်ရမှာလား 4. ကြိုတင်ကြံစည်သည်ဖြစ်စေ ရုတ်ချည်းလုပ်ဆောင်သည်ဖြစ်စေ Video File ကို Edit လုပ်ဖို့ Digital Device လိုအပ်မယ် Laptop Desktop Tablet or Phone ။ သူက ဘာကိုအသုံးပြုနိုင်မလဲ။ သိမ်းဆည်းတဲ့နေရာမှာ အခြား Digital Device တွေရောပါဝင်လား 5.Edit လုပ်ထားတာ သေသပ်လား Save As လုပ်တဲ့နေရာမှာ ဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲ Depen on CCTV DV
Digital Forensics Quizs (26-30)
TikTok Law Enforcement Guidelines
Digital Forensics Quizs (1-5)
နယူးဒေလီ India National Cyber Forensics laborator...